Sisili Rail Light (HRS) | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ígwèKENSİÇİ Rail SystemsUsoro okporo ígwè uhie (HRS)
Ozi igwe okporo ụzọ (HRS)
ANKARAY Ndị njem na-eme njem na nhicha ụlọ
EGO General Directorate Rail Systems Department bidoro ịsachasị ụgbọ elu na nke mpụga nke ụgbọ oloko iri atọ na atọ ejirila mee na ANKARAY na ndị na-asacha akwa. Ibu ihe dị ka 33 puku ndị njem kwa ụbọchị na [More ...]
Ankaragans kwuru na oche nke ụgbọ ndị agha kwesịrị ịgbanwe
Obodo Ankara ga-agbanwe nhazi oche nke ụgbọ ala na Ankaray, usoro ụgbọ okporo ọkụ dị na-eje ozi n'etiti Dikimevi na AŞTİ. Seats nwere oche abụọ dị na ụgbọ agha Ankaray ma ọ bụ oche oche ọhụụ [More ...]
Ihe omumu ihe omumu nke Kocaeli Metro Line na Akwukwo Azi Edozila usoro North Light Rail Line (HRS / LRT) na ọmụmụ ike dị iche iche chọrọ maka njem a kpebiri n'ime oke nke Kocaeli Transportation Master Plan (KUAP). ugwu [More ...]
Ahịa tiketi Marmaray na njem Marmaray: constructionrụ ọrụ Marmaray, nke ga-ejikọ okporo ụzọ dị n'akụkụ abụọ nke Bosphorus, na-aga n'ihu ngwa ngwa. Okporo ụzọ ụgbọ oloko na-agafe n'okpuru Bosphorus [More ...]
A ga-abawanye ikike njem nke Bursaray na 460
Onye isi obodo Bursa nke Obodo Bursa Alinur Aktas, okporo uzo ugbo ala nke Obodo ukwu na usoro omumu na-aga n'ihu, njem ga - abawanye nkasi obi. Nnukwu ọchịchị obodo Bursa, nke bịanyere aka na ntọala ndị gbanyere mkpọrọgwụ na njem, [More ...]
Bursaray Metro: Bzọ BursaRay na-esonye na Mudanya Road Labour Station na West na Acemler Station. Mgbe ahụ, na-eso ụzọ Ankara, site na City Square ruo Şehreküstü Square na Haşim İşcan [More ...]
Siemens meriri inye ndị 25 ụgbọ ala ndị ọzọ maka San Diego Light Rail Sistem ma bịanyere aka na ụlọ ọrụ San Diego MTS na-arụ ọrụ. Usoro ụgbọ okporo ígwè ọkụ nke 53 km [More ...]
Oge njem Marmaray: Thelọ Marmaray, nke ga-ejikọ okporo ụzọ abụọ nke Bosphorus, na-aga n'ihu n'ike n'ike. Lineszọ ụgbọ okporo ígwè na-agafe na Bosphorus ma jikọọ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè. [More ...]
Abu Dhabi Metro Tender. Ngalaba oru ngo a na-agụnye iwu nke netwọk ụzọ ụgbọ oloko na Abu Dhabi. Abu Dhabi Metro mere atụmatụ ka ọ bụrụ akụkụ nke netwọk ka ukwuu maka obodo Abu Dhabi [More ...]
Ụgbọala Car na Metro na Ụlọ Nzukọ na Başkent
Obodo ukwu nke Ankara, bụ nke na-enye ọtụtụ narị puku ndị mmadụ ozi na Ankara kwa ụbọchị, na-eme ka ịdị ọcha dị mma na ụgbọala ndị njem ọha na eze, nke na-ebelata nnukwu ọrụ ụgbọ elu nke obodo. Metropolitan [More ...]
President Erdoğan: Uz Anyị ga-agbatị Ankaray na Mamak gaa 10 Km Cumhurbaşkanı
Mgbe ọ na-ekwu okwu na ememme emepe emepe nke Tolu a na-eme na Uregil National Garden na Mamak, Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan ga-agbatị kilomita 15 na eriri Ankaray. Onye isi ala Erdoğan kwuru, “5 kilomita ọdịda anyanwụ n’etiti AŞTİ-METU, 10 kilomita ọdịda anyanwụ n’etiti Dikimevi na NATA Vega [More ...]
Erdoğan's Transportation Strategy: Ekewapụla obodo na Systems okporo ụzọ
N’ezie, için Dị ka ọdụ azụ nke ụgbọ njem ọha, usoro ụzọ ụgbọ okporo ígwè yiri ka ọ bụ ihe kachasị mkpa maka obodo dị ka Bursa nke na-eto site n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. Agbanyeghị,… Rail sistemụ nwekwara usoro nke ha. Ìhè na Bursaray [More ...]
10 Nde Euro Euro na-egosi Bursaray
Nsogbu kachasị mkpa nke Bursa bụ ụgbọ njem. Nsonaazụ nke nyocha ma ọ bụ igwe okwu ma ọ bụ nke ndị nta akụkọ nke ụmụ amaala ma ọ bụ ndị na-achị obodo obodo na-ekwupụta na-ekwukarị otu nsogbu ahụ. Bursa Mayor Alinur Aktaş, nke a [More ...]
Ụgbọ njem nke Bursa dị na January
Bursa Mayor Alinur Aktaş, yana mpaghara 17 nke Bursa dum, ga-ahụ na Transportgbọ njem ụgbọ mmiri ga-abịa na Mgbakọ Metropolitan na Jenụwarị, mgbe emejupụtara nkwenye ahụ. [More ...]
Ogwe T2 nke Bursa nwere ohere ị gafere site na Tram gaa na HRS
Kemgbe oru ngo nke eriri dị n’agbata Kent Square na Terminal, ndị ọkachamara atụpụtala ụzọ ụgbọ oloko n'okpuru ala, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, Light Rail System (HRS). Ihe oru ngo a nwere ogologo oge xNUMX kilomita na ọdụ 9,4. [More ...]
Muharrem Nwoke: Tax Excise na VAT Wepụrụ na Ụgbọ njem Ọha!
Onye isi oche nke CHP na ntinye iwu nke Iwu Iwu yana akanakkale Muharrem Erkek kwadebere maka iwu na mwepu nke ọrụ excise na VAT na mmanụ ndị a na-eji ụgbọ njem ọha. CHP Nnukwu Onye Ọrụ maka Iwu Iwu [More ...]
Urazọ ụgbọ okporo ígwè Eurasia International, Light Rail Systems, Ntinye aka na isticslọ Ọrụ Njikwa Ngwa 10-12 na-akwadebe ịnabata aha ndị isi nke mpaghara okporo ụzọ ụwa na Izmir na Eprel 2019. Otu n'ime mpaghara Eurasia na ọtụtụ ụwa [More ...]
Ụbọchị Mbụ nke Ụlọ Akwụkwọ na Istanbul Ụgbọ njem 8 Oge Free
Obodo Obodo Istanbul, a ga-emeghe 17 Septemba 2018 Na Mọnde, iji zere njupụta nke okporo ụzọ, ụgbọ njem ọha na-ekpebi inye ọrụ n'efu n'etiti 06: 00 -14: 00 awa. Metrolọ Nkwuu Obodo Obodo Istanbul, Septemba [More ...]
'Akara Change' si Metro Istanbul
Istanbul Metropolitan Municipality Metro Istanbul na-akọ na “Akara 'M' nke a na-anọchite anya ụzọ ụgbọ oloko a ga-agbanwe ma ga-emefu nde kwuru nde maka mgbanwe a. Edere ya na weebụsaịtị weebụsaịtị nke Obodo Istanbul [More ...]
Signage na Metro Istanbul Ga-agbanwe maka Ọhụrụ Akara
A katọrọ Sofia Metro maka myirịta nke njirimara nke akara ngosi 'Metro Istanbul malitere iji. Ya na akara ngosi a, akara metro n’Istrik ga-agbanwe. Mgbanwe a ga-efu ihe dịka 6 nde TL. Na 2016 [More ...]
Nnukwu Ohere Ịnweta Istanbul Rail System Map
Otu n'ime ọrụ dị mkpa nke Metro Istanbul iji meziwanye ogo ọrụ na azụmaahịa elebara anya na njem ọha bụ Rail Systems Network Map site na ọdụ ụgbọ ala, ụgbọ ala na weebụsaịtị nke Metro Istanbul. [More ...]
Site na IETT na Bayramda Public Transportation
Obodo isi obodo Istanbul, ụgbọ njem ọha tupu oge mmemme oriri na nkwari akụ nke Ramadan na oge mgbakwunye, ISKI, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ, ndị uwe ojii na ndị otu, ọkachasị ebe ndị dị mkpa maka usoro ezumike udo. [More ...]
Obodo Metrika nke Ankara na Ankaray'da Citizens na Iftari
Obodo Ankara mepere tebụl iftar maka ụlọikwuu iftar n'ụlọikwuu ift ndị isi obodo guzobere na 9 dị iche iche, ebe ha na-eje ozi oge awa iftar na ọdụ 54 dị na Metro na Ankaray. [More ...]
9 gụnyere Metro na Ankaray Stations na Ankara
Ankara Obodo Ankara, dị ka afọ ọ bụla n’afọ a, “ụlọ dị ụtọ” iftar tent ga-akwado isi obodo ahụ. N’oge nsọ nke Ramadan, ebe mmụọ nke ịdị n’otu, imekọ ihe na ikerịta ihe mere, n’ebe 9 iche nke Isi Obodo. [More ...]
Obodo Ankara ga - enye ụgbọ mmiri nri na - ebu ọnụ ka ọ bụrụ Metro na Ankaray n'oge ọnwa Ramadan maka ndị ọbịa na ndị ọbịa si n'azụ obodo. [More ...]